Soratsarotra - Soamiely Andriamananjara - kirja(9781329625365) | Adlibris kirjakauppa
Eritreritra sendra tsy tana sy tantara fohy vitsivitsy notsongaina sy nofantenina ho an'ny masonao. Amin'ny teny Malagasy daholo izany rehetra izany. Mikasika an'i Madagasikara sy ny Malagasy ary izao tontolo izao. Mety tsy hanaisotra tanteraka ny hetahetanao, fa mety hampirisika anao haka jinjany bebe kokoa ary hiroboka amin'ny lalindalina kokoa hatrany. Sotroy ary ka aza kofona ...Finareta mamaky an!
Kirjailija: Soamiely Andriamananjara
CHEN FALAI ET AL
Anne Maitso Tapenaka